गजलमय आजको सुखद दिन – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
गजलमय आजको सुखद दिन
२०७१ असार १४, शनिबार ०३:१५ गते
सही काम, स्तरीय काम, ठट्टा होइन । साहित्यिक समर्पण पनि ठूलै त्याग हो, बलिदान हो । साहित्यको नाममा गाँस काटेर लगानी गर्नेहरुलाई म कोटीकोटी प्रणाम गर्दछु । यही जिल्लामा संयोग नै भनौँ साहित्यको नाममा मन, बचन र कर्म तथा तन, मन, धन अर्पण गर्नेहरु लामिछाने मात्रै तीन परिवार छन् । कति राम्रो, अति राम्रो । अरु पनि छन्, थुप्रै
छन् । साहित्यको जगेर्नामा समय अर्पनु भनेको चानचुने कुरा होइन । औसत आत्माबाट यो सम्भव हुन्न । फेरि साहित्य असल र स्तरीय साहित्य, भीडमा रमाउन्न । भीडसित उन्माद र शक्ति त हन्छ, तर विवेक नहुन पनि सक्दछ । आजको अनुभूत तथ्य ।
आज फेरि म पुरानै कुराहरु दोहो¥याउन आएको छु । हामी चितवनवासी । गजलमा हाम्रो हैसियत कति छ ? हाम्रो अस्तित्व कहाँनेर छ ? के हामीले गजलजस्तै गजल लेखिरहेका छौँ ? माफ गर्नुहोला । म अलि अनुदार मार्गतिर उन्मुख
हुँदैछु । सीमाभन्दा ज्यादा उदारता साहित्यको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्दछ । कहाँनेर छ त हाम्रो हैसियत ? कि हामीले गजलको त्यो उचाइ छोएकै हो ? गजललाई ज्यादै सरल विधाका रुपमा लिइन्छ, जो पनि गजलकार अरे । तर, मेरो मन रून्छ । के हो तेरो हैसियत ? आफैँसित प्रश्न गर्न मन लाग्छ । म त गजलको मामिलामा नर्सरीकै सानो भुरा हुँ । केही पनि जान्दिनँ । गजलजस्तै गजल लेख्ने रहर नभएको होइन । रहर छ, तर ढंग मरू । अब कसो गरुँ ! वाह यस्तो पो शेर ! भावकले हृदयबाटै भनोस्, तब न मज्जा आउँछ । म हाम्रो मझेरीमा, यो सुन्दर पुष्पबाटिकामा यो विषयमा बहस होस् भन्ने चाहन्छु ।
गजलको सागर बन्न हरेक बुँद गजलमय हुनुप¥यो । हरेक गजल मनले भन्नुप¥यो, मरूभूमिमा परेँ र त गजलकार भएँ । अनि विज्ञ गुरूवर्गले भन्नुप¥यो, मनपरी शब्द घुसाउँदैमा गजल हुँदैन । अनि मात्र हाम्रो विजय हुन्छ । अनि मात्र हरेक पण्डित नयाँ प्रभा बोकेर दुवै कर जोडी बिहान–बिहान नारायणीमा नुहाएर प्रभाकरलाई प्रणाम गर्नेछन् । यही मेरो कामना हो, मेरो भावना हो । त्यसपछि थाहा हुन्छ हाम्रो हैसियत । हामीले सही काम गरेमा हाम्रो अस्तित्वको सम्मान हुन्छ । अनि मजस्ता भालुभुत्ते गायकले ‘अब छोड त्यो आकाश र पातलको कुरा, आऊ मिलेर आज गरौँ हालको कुरा’ भनेर ह्याकुलाले मिचेर गाउनु पर्ने छैन । यो कर्कस गन्दर्भ राग सुन्नु कोही पनि आउनु पर्ने छैन । भावकहरुले दुःख पाउनु पर्ने छैन ।
आज हाम्रो हैसियत प्रमाणित हुनेछ । हामी गंगामा मात्र होइन, गजलको मूल गंगोत्रीमा नै नुहाउने छौँ । सबैलाई गजल रसवरी खुवाउने छौँ । सम्पूर्ण लोकलाई गजल सुनाएर मन्त्रमुग्ध बनाउन हाम्रा आदरणीय प्राज्ञ लोकबहादुरज्यू बहादुरीका साथ प्रस्तुत हुनुहुने छ । यही त हो हाम्रो अस्तित्व । म खुसी छु यस अर्थमा पनि कि आजको दिनमा एउटा असाधारण गजलप्रतिभा ५६ वसन्त पार गरी ५७औँ वसन्तमा पदार्पण गर्दै हुनुहुन्छ, दाजु घनश्याम । द्वापरयुगमा त घनश्याम काले कृष्णले प्रियसी राधालाई धोका दिएका
थिए । त्यो क्षतिपूर्ति कलियुगमा भएको छ । आजको पावन दिनमा यी प्रथम गजल विद्यावारिधि महापण्डितलाई अझै परिश्रमी बन्न अनुरोध गर्दै हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु !
यो कमर्सियल ब्रेकपछि म मुख्य समाचारतिरै फर्किन्छु । मध्य असार ! हामी भने रुप र सार खोज्दै छौँ, गजलमा यो पनि एउटा खेती नै हो । धान खेती नहोला, मान खेती हो । सम्मान खेती हो । विशेषता चरैवेति हो । मैले भन्ने यत्ति हो । हरेक अनुष्ठानमा उपस्थित भएर केही भन्न पाए, सुन्न पाए र सुनाउन पाए पुग्छ मलाई । यो एउटा स्नेह–मिलन हो । हार्दिकता र आत्मीयता निःशुल्क प्राप्त हुन्छ चितवनमा । मेची, काली, भेरी, सेती सबै आएर पवित्र नारायणीमा मिल्दछन् । यो ठूलो उपलब्धि हो । अब हामी अज्ञात हुनेछैनौँ । हाम्रो यात्रा अपूर्ण हुनेछैन । चितवनको माटो राम्रैसित मगमगाउने छ । हाम्रो गजल दियो जगमगाउने छ । गजललाई धारे हात लगाउनेहरुको सत्ता डगमगाउने छ । यस्तो अवश्य हुनेछ । विदुर हाँस्नेछन्, शकुनि रूनेछ । विनोदीदेखि विनोदसम्म, चन्दनदेखि नन्दनसम्म नाच्ने दिन हो आज । यो गर्मीमा पनि हामीलाई कति शीतल हुने छ । हामी गाउने छौँ, कहाँ थियौ तिमी….. अहँ, कल्पना गर्दा पनि कति रमाइलो ! झन् साक्षात्कार हुँदा, नेत्र–मिलन हुँदा कस्तो होला ! रोमाञ्चित भइरहेछ मेरो मन ।
आजको दिन चितवनको गजल साहित्यको इतिहासमा एउटा स्वर्णिम दिन हुनेछ । सरकारले केही गरोस् वा नगरोस्, जनस्तरबाट यति राम्रो कार्यक्रमहरु सम्पादन हुनु सानो कुरा होइन । म सम्झिरहेछु अभूतपूर्व जोडी नई अर्थात् दाजु नरेन्द्रराज प्रसाई र भाउजू इन्दिरा प्रसाईलाई । के उहाँहरुको जाँगर अनुकरणीय छैन र ? साहित्य शब्द सुन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउने हतभागी नादानहरुलाई मेरो भन्नु केही छैन ।
आज हाम्रो दिन हो । गजलको दिन हो । आफन्तहरुका बीचमा माया, सद्भाव र स्नेह साटासाट गर्ने दिन हो । यो दिनमा म सम्पूर्ण गजल मनहरुलाई हाम्रो मझेरीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु । यस्ता विशिष्ट दिनहरुको प्रेरणाले नै हामी जीवनमा विशिष्ट काम गर्न लायक रहेछौँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछ । हाम्रो हैसियत थाहा हुन्छ । आज कैफियतको कुरा नगरौँ । युवाहरुको जोस र जाँगरमा नै देशको सुन्दर भविष्य अडिएको हुन्छ । म आज यहाँ भोलिको सुन्दर नेपालको चित्र अनुभूति गरिरहेछु । अबको २० वर्षभित्रमा अवसर खोज्दै कुनै पनि नेपालीको सन्तान गोजीमा राहदानी बोकेर जेटतिर लाग्नेछैन । भस्मासुरको पालो पुग्यो । अब भाङ, धतुरो र गाँजाको ह्याङबाट मुक्त भई स्वयम् महादेव विकासे डमरू बजाई धेरैधेरै राजनीतिक गोरूहरु तह लगाउन आफ्नै नन्दी साँढेमा आउने छन् । पक्कै आउने छन्, किनकि सम्भवामी युगे भन्ने बेला हो यो । हरेक मान्छे श्रीकृष्ण बन्ने बेला हो यो । साहित्यमार्फत् समाजमा सार्थक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । साहित्यले त्यो रसायनको काम गर्नुपर्दछ, जसले तीन कोटी नेपालीलाई हामी फगत् नेपाली, हाम्रो रगत नेपाली भन्ने सन्देश प्रदान गरोस् ।
आज गजल मात्र गजलका लागि लेखिनुभएन । हो, ‘और भी गम है जमाने मेँ मोहब्बत के सिवा’ यो पनि सत्य हो । यसको अर्थ सभ्य र शालीन प्रणय–रसलाई बहिष्कार गर्नुपर्दछ भन्ने होइन । प्रेमरस यो प्रेमसुधा रहन्छ रहन्छ र हरेक घायल प्रेमी गुनगुनाउँछ ः
कसैको यादमा तड्पी
बसेको आज धेरै भो
नुनिला मोतीका दाना
खसेको आज धेरै भो !
यस्तो हुन्छ प्रेममय हृदयको आवाज । त्यही आवाज आज फेरि गुन्जिने छ, हाम्रो मझेरीमा । म सम्पूर्ण गजलमनहरुलाई यो चितवनको गजल नगरीमा यही अभिव्यक्तिमार्फत हार्दिक स्वागत गर्दछु । बधाई, हाम्रो प्यारो गजलमय अस्तित्वलाई !